Kofi Annan oo ka digay dagaal sokeeye oo ka bilaabma dalkaasi Suuriya – Radio Daljir
Kofi Annan oo ka digay dagaal sokeeye oo ka bilaabma dalkaasi Suuriya
Damascus May 09 – Ergeyga caalamiga ah ee qaabilsan dalkaasi Suuriya Kofi Annan ayaa sheegay in hindsihiisa lixda qodob ka kooban ee xalinta mashaqada Suuriya uu yahay fursaddii ugu dameysay ee xalka Suuriya, waxana uu ka digay dagaal sokeeye oo ka qarxa dalkaasi Suuriya.
Kofi Annan ayaa sheegay in quwadaha adduunku ay ka midaysanyihiin walaaca laga qabo in rabshadaka ka oogan dalkaasi Suuriya ay isu bedelaan daagal sokeeye oo aan la xakamaynkarin.
Isagoo ka khdubeynayey golaha ammaanka ee qaramada midoobey , islamarkaasina ka soo hadlayey Geneva ee dalka Switzerland ayaa sheegay in dalkaasi Suuriya ay ku soo badanayaan qaraxyadu,waxana uu ka digay in dagaal sokeeye oo ay cagaha la gasho suuriya aanu keliya saamayn doonin Suuriya laakiin uu raad xun ku reebi doona mandiqadda bariga dhexe.
Hay?adda ICRC ayaa sheegaysa in qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi Suuriya ay goor horeba isu bedeleen aag uu ka socdo dagaal sokeeye.
Dalkaasi Suuriya ayaa waxaa ku sugan 60 kormeerayaal ah oo ka socda qaramada midoobey,waxana qorshuhu yahay in kormeerayaashi la gaadhsiiyo 300 oo kormeere.
Rabshadaha dalkaasi Suuriya ayaa soo bilaabmay bishii march e esanadkii hore ,waxana kooxaha u dhaqdhaqaaqayaasha ah ee dalkaasi suuriya sheegayaan in rabshadahaasi ay ku dhinteen wax ka badan toban kun oo ruux .
Gudiyada iskuxidhka kacaanka ee dalakasi suuriya ayaa sheegay in salaasadii shalaytoole oo keliya la dilay 20 qof.